Madaxweyne Xusni Mubaarak Oo Xukunka Ka Degey Iyo Cabsida Laga Qabo Xaalada Siyaasadeed Ee Masar | Araweelo News Network (Archive) -
Madaxweyne Xusni Mubaarak Oo Xukunka Ka Degey Iyo Cabsida Laga Qabo Xaalada Siyaasadeed Ee Masar
Qahira(ANN)Madaxweynihii Dalka Masar Xusni Mubarak, ayaa goor dhawayd iska casilay xilkii Madaxtinimmo ee dalka Masar oo uu muddo dheer soo hayay, ka dib, mudaharaado muddo saddex todobaad ku dhaw ka socday dalkiisa oo lagaga dalbanaya inuu xilka iskaga tago, balse
uu markii hore ka dhega adaygay.
Sida uu Telefiishanka dalkaas ka shaaciyay Madaxweyne-ku-xigeenkii Mubarak Cumar Suleyman, Madaxweynihii Masar Mubarak, ayaa iska casilay xilkii Madaxtinimo, kuna wareejiyay awoodii dalka Golaha Sare ee ciidammada.
Hadalka ka soo yeedhay Madaxweyne-ku-xigeenka Masar uu ku sheegay iscasilaada Mubarak, ayaa mar qudha bedeshay dareenka kumanaan mudaharaadayaala oo dalbanayay is-casilaada Madaxweynaha, kuwaasoo mudaharaadkoodii u rogay farxad iyo damaashaad.
Madaxweyne Xusni Mubaarik oo la filayay inuu xalay is casilo ayaa jaah wareeriyay warbaahinta dunida. Kadib markii masuuliyiin ka tirsan xukuumadiisu shaacisay inuu talaabo qaadayo oo uu dadweynaha kala hadlayo telefishanka ayaa xalay goor danbe la faafiyay inuu diiday inuu iska casilo xilka, isagoo ku dooday inuu awooda wareejinayo, balse uu xilka sii haynayo ilaa inta ay dhamaanay mudadiisu, taas oo ka cadhaysiisay mudaharaadayaasha oo sababtay inay kacdoonadu sii socdaan ilaa ay khasab ku noqotay inuu saacadihii lasoo dhaafay si rasmi ah xukunka uga degey.
dhinaca kale sida uu kusoo waramay wakiilka shebekada Araweelonews ee Masar Xasan Raawi waxa Talada dalka masar ayaa hada ay gacanta ku hayaan ciidamada qalabka sida ee dalkaa, waxaana wararku sheegayaan inay soo dhisidonaan ciidamada qalabka sida dowlad kumeel gaadh ah oo dalka uu yeesho. ma jiro caawa dalka masar Madaxweyne haya awooda dalkaa, wuxuuna galay madaxweyne la aan. laakiin waxa talada gacanta kuha ciidamada qalabka sida ee dalka masar, waxaana aad loo adkeeyay amaanka dalka masar oo ay usugayaan ciidamada milatariga iyo ciidamada booliska ee masaarida ah
wili waxa soconayaa mudaharaadka kasoconaayay dalka masar. lakiin caawa wuu kaduwan yahay mudaharaadka kii hore u soconaayay, sababtoo ah caawa ka kasocdo ayey ugu macna dareen mudaharadkii l.agu sagootiyayay Mubaarak
lasoco wixii warar ah ee ku sookordha iscasilaada madaweyne mubaarak ee dalka masar
Dalka Masar oo caan ku noqday inay Milaterigu xukunka la wareegaan ayaan la saadaalin Karin sida ay xaalada siyaasadeed noqonay, isla markaana waxa jirta cabsi soo waajahday dalalka reer galbeedka iyo Israaiil oo indhaha ku haya xaalada dalka Masar oo ay ka cabsi qabaan inay xukunka la wareegaan kooxo dhulka ku tuura danohooda siyaasadeed iyo qorshayaashooda, iyadoo ay jiraan kooxo mayal adag oo lug weyn ku leh siyaasada dalka Masar, kuwaas oo la rumaysan yahay inay qayb ku lahaayeen kacdoonada dhowrka todobaad ka socday halkaa ee sababay inuu Madaxweyne xusni Mubaarik oo mudo soddon sannadood ah ka talinayay dalka Masar. wixii kasoo kordha xaalada dalka Masar kala soco halkan
caasimada qaahira ee dalka masar